नेपालमा हिक् भिजन सुरक्षा क्यामेराहरू कहाँ खरीद गर्ने ? - InHeadline
नेपालमा हिक् भिजन सुरक्षा क्यामेराहरू कहाँ खरीद गर्ने ?
By Anu Rana on Jun 06,2018 - 20:00
Safety & Security Tradelink ले १००० भन्दा बढी ग्राहकहरूलाई सन्तुष्ट प्रदान गर्दै आएको छ र ग्राहकको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रदान गर्नेछौ । यस कम्पनिले बिभिन्न ब्रान्ड र गुणस्तरको बारेमा पनि जानकारी दिने गर्दछ। यसले हाम्रो देशको व्यवसायिक क्षेत्रलाई थप वृद्धि र टेक्नोलोजी अनुकूलको लागि योगदान दिन सक्छ।
भनदै यस कम्पनीले तपाईंहरु समक्ष हिकभिजन एनलग टर्बो एचडी ४ ।० र डीभीआर हिकभीजन इजी आईपी ३ ।० नेटवर्क एनभीआर मोडेलका दुई नयाँ सीसी क्यामेरा बजारमा लिएर आएका छ । ग्राहकको नयाँनयाँ मागलाई सुहाउँदो नयाँ फिचरका साथ कम्पनीले टर्बो एचडी क्वालिटीका सीसी क्यामेरा नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ ।
कम्पनीले बिभिन्न उपयोगी फिचरको साथमा हिकभिजन एनलग टर्बो एचडी ४ ।० र डीभीआर हिकभीजन इजी आईपी ३ ।० नेटवर्क एनभीआर मोडेलका दुई नयाँ सीसी क्यामेरा बजारमा ल्याएको हो। जुन तपाईंले यो ठेगानामा गोएर सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुने छ
कम्पनिको नाम : Safety & Security Tradelink
ठेगाना : कपन्-६, काठमाडौं
मोबाइल नाम्ब : ०९७७-०१-४३७२९०८/४८२०८७४/९८५१०४६८८०
ईमेल : safensecu13@gmail.com
Safety & Security Tradelink को डिलर नेपाल भरि छ
ट्याग - नेपालमा हिक् भिजन सुरक्षा क्यामेराहरू कहाँ खरीद गर्ने ?